အကောင်းဆုံး လတ်ဆတ်သော ငါးနှင့် အသားများကို အမြန်ပေါက်ကွဲစေသော ရေခဲသေတ္တာ အအေးခန်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ | Runte
Multi Deck Open Chiller
မှန်တံခါး မတ်တပ် Chiller
မှန်တံခါး မတ်တပ် ရေခဲသေတ္တာ
Fresh Meat Showcase ကောင်တာ
Deli Food Showcase ကောင်တာ
Promotion Display ရေခဲသေတ္တာ
Cooler တွင် Walk in ပြပါ။
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သိုလှောင်မှု
Semi-hermetic Condensing ယူနစ်
ရေခဲသေတ္တာ ပရောဂျက်ကို ပြသပါ။
လတ်ဆတ်သောငါးများနှင့် အသားများကို အမြန်ပေါက်ကွဲစေသော ရေခဲသေတ္တာ အအေးခန်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။
သိုလှောင်ရန်သင့်တော်သည်- ကြက်၊ ဖက်ထုပ်၊ အသား၊ ရေခဲမုန့်၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာ စသည်ဖြင့်။
1. -30~-40 ဒီဂရီ၊ သင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်ပစ္စည်းများအတိုင်း ချိန်ညှိပါ။
2. High-density foam storage board ၊ ကောင်းသောအပူကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု
3. နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် Bitzer၊ Carrier compressor၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု
4. ပန်ကာသည် ကြီးမားသောလေထုထည်နှင့် တူညီသောလေထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူ ပြည်တွင်းပထမလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ကို လက်ခံသည်။
5. သင့်အား ပေါင်းစပ်ပုံဆွဲဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ပါ။
အသားပင်လယ်စာ ရေခဲမုန့် သိုလှောင်ခန်း ပါရာမီတာ
အတိုင်းအတာ စိတ်ကြိုက်အရှည်၊ အနံ၊ အမြင့်
ရေခဲသေတ္တာယူနစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ/Bitzer/Copeland စသည်တို့
ရေခဲသေတ္တာအမျိုးအစား လေအအေးခံ/ရေအအေးခံ/အငွေ့ပျံ အအေးခံထားသည်။
ရေခဲသေတ္တာ R22၊R404a၊R447a၊R448a၊R449a၊R507a ရေခဲသေတ္တာ
Defrost အမျိုးအစား လျှပ်စစ် defrosting
ဗို့အား 220V/50Hz၊220V/60Hz၊380V/50Hz၊380V/60Hz၊440V/60Hz ရွေးချယ်နိုင်သည်
ဘောင် ပစ္စည်းအသစ် polyurethane လျှပ်ကာ panel၊ 43kg/m3
ဘောင်အထူ 180mm 200mm
တံခါးအမျိုးအစား ဆွဲထားသောတံခါး၊ လျှောတံခါး၊ နှစ်ချက်လွှဲလျှပ်စစ်လျှောတံခါး၊ ကုန်တင်တံခါး
အပူချိန် အခန်း၏ -30 ~ 40 ℃ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ ကြက်သား၊ ဖက်ထုပ်၊ အသား၊ ရေခဲမုန့်၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာ စသည်တို့။
အသုံးအဆောင်များ လိုအပ်သောအသုံးအဆောင်များ အားလုံးပါဝင်သည်၊ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
စုဝေးရန်နေရာ အိမ်တွင်း/အပြင်တံခါး(ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေး/သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး အဆောက်အဦ)
သင့်လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော အအေးခန်းဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်များအား ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
အအေးခန်းဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ 22 နှစ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
3.Cold storage ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အရည်အချင်းစစ်
ကုမ္ပဏီသည် အတွေ့အကြုံများစုပုံခြင်းအတွက် အလွန်အရေးပါပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ရန် ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဖိအားပိုက်များ၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုများ၊ ရေခဲသေတ္တာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် အရည်အချင်းများ ရှိသည်။ ၎င်းတွင် အအေးခန်း၏ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်မှုကို စောင့်ကြပ်ရန် တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် ဒါဇင်များစွာပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အအေးခန်း ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ အများအပြားသည် စီးပွားရေးတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘွဲ့များ ရရှိကြပြီး အအေးခန်း ဒီဇိုင်း အိတ်ပေါင်း 10,000 ကျော်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Carrier Group ၏ OEM စက်ရုံဖြစ်ပြီး Bitzer၊ Emerson၊ Schneider စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပထမလိုင်းနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အအေးခန်း ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အခမဲ့ quotation ကို ရောင်းချခြင်းမပြုမီ၊ နှင့် ရောင်းချပြီးနောက်- တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင်ပေးခြင်းတို့ကို လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အရောင်းအပြီးတွင် ဝန်ဆောင်မှုကို 24 နာရီ ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
100/120/150/180/200mm အကန့် Bitzer/Carrier/Emerson နှင့် အခြားယူနစ်များ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လေအေးပေးစက်
0.426mm သံမဏိဘောင်，အမြှုပ်ထွက်ခြင်းသည် သိပ်သည်းဆ 38-45 ကီလိုဂရမ်အထိရှိပြီး ကောင်းသောအပူထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ။ မူလတင်သွင်းလာသော ကွန်ပရက်ဆာသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ကြီးမားသော အအေးခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်း။ လေထုထည်သည် တူညီပြီး လေဝင်လေထွက်အကွာအဝေးသည် ရှည်လျားသောကြောင့် အအေးသိုလှောင်မှု၏ တစ်သမတ်တည်း အအေးခံမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
ပတ္တာတံခါး သို့မဟုတ် လျှောတံခါးကို အရည်အသွေးမြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံကာ ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်ချက်အရ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာ အမှတ်တံဆိပ် အရည်အသွေးမြင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိရာတွင် အဆင်ပြေစေပါသည်။
Danfoss Solenoid Valve Danfoss Expansion Valve ကြေးနီပိုက်
အရည်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းညှိပေးခြင်း refrigerant စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ပြွန်နံရံသည် ချောမွေ့ပြီး အညစ်အကြေးများနှင့် အောက်ဆိုက်စကေးများ ကင်းစင်ပါသည်။ ပိုက်လိုင်း၏ တင်းကျပ်မှုနှင့် သန့်ရှင်းမှုကို သေချာပါစေ။
ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံပြီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ တောက်ပမှုမြင့်မားမှု၊ ကြီးမားသော အလင်းဧရိယာ။ ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ တည်ငြိမ်သော အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဂိုဒေါင်အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် လေလဲလှယ်မှုကို သီးခြားခွဲထုတ်ပါ။
မလေးရှား သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အအေးခန်း
British processing room အအေးခန်း
US container အအေးခန်း
ဥရုဂွေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အအေးခန်း
American Food အအေးခန်း
ကမ္ဘောဒီးယား အအေးခန်းကို စီမံဆောင်ရွက်သည်။
နိုင်ဂျီးရီးယား ကာကွယ်ဆေး အအေးခန်း
ယခင်- အသားပင်လယ်စာ အအေးခန်း သိမ်းဆည်းခြင်း။
နောက်တစ်ခု: ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးဥများအတွက် အအေးခန်း သိုလှောင်မှု
Blast Freezer အအေးခန်း
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက် အအေးခန်း
အအေးခန်း Pu Panels
Food Storage အအေးခန်း
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အအေးခန်း
အသီးအနှံများကို အအေးခန်းတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးဥများအတွက် အအေးခန်း သိုလှောင်မှု
အအေးခန်းတွင် သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သိုလှောင်မှု
အသားပင်လယ်စာ အအေးခန်း သိမ်းဆည်းခြင်း။
Wangui လမ်း၊ Wufeng စက်မှုပန်းခြံ၊ Changqing ခရိုင်၊ Jinan မြို့၊ Shandong ပြည်နယ်၊ တရုတ်